Iyo iPhone inoenderera kuve Flickr inonyanya kufarirwa kamera | IPhone nhau
Nekuuya kwemafoni akangwara, iwo matunhu akatambura aive akati wandei. Iyo GPS yakatsaurirwa yaive shoma; MP3 vatambi vakacherechedzawo kudzikira uye, chokwadika, nekufamba kwenguva, iwo makamera. Muchikamu chemafoni epamusoro-soro inozivikanwa kuti chimwe chezvakanyanya kusiyanisa makamera.
Aya makamera ari kuve nani uye ari nani; iyo tekinoroji inoshandiswa ndeyemhando yepamusoro uye mhedzisiro haina chekuita neyeyakakurumbira compact makamera ezuro. Saizvozvo, zvakare ichokwadi kuti, kunyangwe zvingaite sezvakadaro, ivo zvakare havawani mhedzisiro senge iyo inopihwa nehunyanzvi kamera. Zvino, chii chavari kuenda kwavari? Zvakanaka chii isu tinogara takatakura nharembozha muhomwe uye zviri nyore sekuiburitsa uye kutora pikicha. Uye kana isu tichitaura nezve iyo iPhone uye mhedzisiro yainopa mu "Portrait" mode, zvirinani zvirinani. Saka iyo iPhone iri kamera inonyanya kufarirwa kubva kuFlickr.
Gore rega rega iyo inozivikanwa foto saiti uko vashandisi vanogona kuchengeta yavo mapikicha; odha ivo uye kunyange kuvatengesa, iye anodhinda iwo manhamba egore rese pane rake repamutemo blog. Tiri mumwedzi waZvita. Uye inguva yekuita ongororo: vashandisi upload mamwe mapikicha kuburikidza nenjere mafoni. Kunyanya kuva chaiwo: 50% yevashandisi vanoshandisa mafoni ekuzadza avo maakaunzi emifananidzo. Chikamu chinotevera DSLR ine 33%.
Zvino, kuti zvive zvakanyatsojeka, iwo makumi mashanu ezana evashandisi vanoshandisa mafoni ekuisa mifananidzo painternet sevhisi vane chiratidzo chinodiwa. Uye sezvaungave watoona kare: 54% yeaya mafoni ndeye iPhone. Uyezve, iwe unogona kunge uchifunga kuti ndiyo iPhone 7 zvichienda mberi. Asi warasika. Kubva kuFlickr ivo vanotiudza kuti inonyanya kufarirwa iPhone iri iPhone 5S, iPhone 6 uye iPhone 6S.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » IPhone inoramba iri kamera inozivikanwa kwazvo yeFlickr